सुन्दरहरैंचाकी ५ महिने शिशुको कोभिड अस्पताल धरानमा मृत्यु - निष्पक्षखबर
विराटचोकः मोरङको सुन्दरहरैंचाकी ५ महिने शिशुको कोभिड अस्पताल धरानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । कात्तिक ७ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी उनी सोही दिन अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सह प्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठका अनुसार उनको हिजो कात्तिक ७ गते साँझ ७ बजेर ५० मिनेट जाँदा ज्यान गएको हो । उनी मष्तिष्कसम्बन्धी रोगबाट पीडित रहेको डा. श्रेष्ठले बताए ।